Home Wararka Farmajo iyo Rooble oo diyaarinaya Doorasho Boob ah iyo Mucaaridka oo Dulleysan...
Farmajo iyo Rooble oo diyaarinaya Doorasho Boob ah iyo Mucaaridka oo Dulleysan iskana Daawanaya
Magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday dilal qorsheyn oo la shabaabeynayo ama lagula heshiinayo inay iyaga fuliyaan, kii u dambeeyeyna waxaaa lagu fuliyey Cabdicasiis Afrika oo ahaa nin joojiyey inyasan codadka iyo qoraalada Farmajo iyo shabaabka ka bixin idaacadaha qaranka. Waxaa la iska magacaabaa Xilal boob ah oo iska soo dabadhacaya oo xataa ay heer wasiir iyo wasiir dowle ku jiraan iyadoo wiifto beenaad horay looga soo saaray la iska tuuray.
Waxaa handadaad iyo cabsiin joogto ah oo lagu hayaa odayaasha dhaqanka ee Beelaha Xamar dega si ay u ogolaadaan waxa laga rabo oo ah ina doorashada lagu shubto taas oo aan xaq iyo xalaal ahayn haddii ay diidaanna uu dil uu ku xigo, kuwa bandanna saas ay ku baxeen, waxaana ugu dambeysan in Beesha Waceysle maanta loo wado inuu matalo ninka loo haysto dilka Ikraan Tahliil, beerina loo yiraahdo ma dad baad tihiin waxaa idin matala hebale.
Waxaa hawl adag loo galay in saaxadda laga saaro xildhibaanadii Farmajo iyo hannaankiisa dowladxumo ka soo horjeedi jiray ama su’aalo ka keeni jiray oo la rabo in bannaanka la dhigo si loogu badasho kuwa dambiilayaal ah oo faro looga hayey sida Fahad iyo Yasiin Farey ama nacamlayaal calooshood u shaqeystayaal ah sida Mahdi Guleed, Cali Yare ama Alcadaala iyo iyadoo qalinka iyo qor iga lagu fulinayaa dhammaan gefefkaas iyo gabood falladaas ay ku adeegayaan kuwo caruurtooda lagu gowrici doono awoodda loo socdo in sidaas xaaraanta ah lagu helo, berrina ay ka shallay doonaan.
Sanadkii 1988 iyo Sanadkan 2021
Somaliya waxay ku socotaa waddo la mid ah 1988 dadka maanta hoggaamka u hayaa dalka ama kuwa siyaasadda daneynayaa ama shacbiga oo dhallinyaro u badan ma fahamsana inuu soo muuqdo sansaan colaad oo la mid ah wixii dhacay 1988. Sidoo kale Beesha caalamka oo sidii shilinta u nuugta dhiigga waddamada ay dagaallada sokeeye ka dhacaan ma rabaan inay horqabateeyaan waxa soo socda, weyna iska tagi doonaan sida Afganistaan iyo Ciraaq oo la ogyahay heerka ay caalamka ka joogtay iyo sida ay beesha caalamka ku dambeysiisay.
Waxaa haboon inaan taariikhda waxka baranno oo horjoogsanno daadka dalkeenna ku soo socda. Fahad iyo Farmajo kama duwana Maxamed Siyaad iyo kooxdii askarta ahayd oo runtii burburka dalkaan hooyo iyo Aabo u ah, iyagana dadbaa la safnaa oo rabay inay xaaraanta la quutaan, maantana kuwa qabiil kasta leh sidii Maxamed Siyaad ayey Farmajo ula jiraan iyagoo og inuu yahay shakhsi dalkaan ku wada burbur iyo halaag.
Sidee ayuu burbur ku iman karaa oo 1988 loola simi karaa 2021 waa su’aal aad akhriste isweydiin karto balso aan jawaab ku siinno.
Doorashada la qaban waayo oo ay Farmajo iyo xulafadiis goostaan inay xoog ku joogaan cid oggolaaneyso ma jirto qof walibana halka ay joogto ayey ka soo dhaqaaqeysaa sidii Maxamed Siyaad. Siyaad Bare ma ridin ciidan ee Shacbiga ayaa riday oo la saftay wiilal yar oo Ak47 wata, haddana sidaas ayaa dhaceysa, waana iska carari doonaan Farmajo iyo Fahad waxaasa hoogga iyo halaagga magansan doona kuwa badan oo hadda u muuqda inay is indhatirayaan iyo kuwa uu huguri wado balsa og waxa soo socdaa oo doqonimmo Farmajo ula safan.
In la qabto doorashada is jiijiid kadib, laakiin ay ku shubtaan kooxda Farmajo waa sida uu qorshahooda u socdee iyagoo kaashanaya Qoorqoor, Laftagaren, Rooble iyo Guudlaawe oo isaga ugu dambeynta ku biiri doona waxaa oodda soo jabsan doona dhamaan caro iyp naceyb wixii uu Farmajo kasbaday waxaana la isula tagi doonaa gacanta, waxaana halkaas ka dhalan kara dagaal oogayaal hubeyan oo kala xerta aagag Muqdisho ah, kuwaas oo ka sameysmi doonaa musharixiinta maanta Mucaaridka ah.
Beesha Caalamka ayaa iyada iska guuri doonta oo sameyn doona sidii Afganistaan waxaana loo kala tagi doonaa Somalida halkaasna uu dalku ku baabi’I doono.
Haddaba si looga badbaado xaaladahaan soo muuqda waxaa loo baahan yahay xal degdeg ah oo ay la yimaadaan dadka ay ka go’odo talada. Talada kama go’o do qof raba inuu wax boobo ama uu xukunka xoog ku joogo, waxay ka go’daa dadka dalka si daacad ah u daneynaya ee ay gurayaha, ilmaha iyo ganacsiga uu ka baaba’ayo. Ganacsatada waxaa laga rabaa inay maaligeliyaan sidii Farmajo looga rujin lahaa talada dalka oo isagoo shacbi ah uu ula sinnaan lahaa daneeyayaasha siyaasadda.
Shacbiga Walaalaha Sudan
Maanta waxaa guul la hubayey haddey bannaanka u soo baxaan oo ay iska diidaan gumeysiga cusub una hawlgalaan inay gaarayaan, gaaray Shacbiga walaalaheen ee reer Suudan oo iska diiday kaligii taliye ciidanka oo dhan haysta, waxayna talada ku soo celiyaan RW Hamdook. Annaga ma kuwaas ayaan ka liidannaa oo waxaan ogolaaneynaa kaligii taliye hadda tabardaran oo aan qof iyo laba ka badan dili Karin, laakiin la hubo maalinta uu xoogeysto inuu dili doono boqollaal Somaliyeed?
Mucaaridka is wada gaadayaa iyo Shacbiga oo is Dhagooleynaya.
Mucaaridka iyo shacbiga ha ka jawaabaan su’aalahan:
Maxaan u ogolaaneynaa doorasho la hubo inuu lagu shubanayo, laguna soo shubtay sida aan ognahay oo aqalka sare loo soo dhistay?
Maxaan u sugeynaa dagaal ay dad badani ku dhiman doonaan oo aan uga war wareegeynaa dagaal ka fudud oo maanta saacado bannaanka loo soo baxaa ku eg?
Maxaan u ogolaaneynaa inuu Farmajo oo la siman madaxweynayaashii hore inuu Rooble u sii maamulo doorasho uu ku soo shuban doono?
Maxaan ula shaqeyneynaa dhammaanteen shacbi iyo Mucaaridba R/Wasaare Rooble oo dhowr jeer na khiyaanay oo beenlow iyo beesa doon ah?
Maxaan u sugeynaa inta uu Farmajo sharciyad ka helayo oo ay siin doonaan barlamanka uu soo dhisan doono, hadhowna caalamka uu oran doono dowladdi shacbiga doortay ayaad ka soo horjeedaan?
Waxay maanta joogaa doqoni waxay u dagaal la’adahay yaan lagaaga darin. Farmajo waxaana uu joogaa waa inaan xukumaa Xamar iyo dadkeeda haddii kale waa inuu dagaal ka dhacaa. Rooblana waxaana uu joogaa “Aabbo waa Runtaa”.
Ugu dambeyn, Mucaaridka oo nin waliba dantiisa u mucaarid ah oo leh haddaan aniga heleyn Farmajo ha joogo, oo dhabarka iska wada tooganaya, una kala dhuumanaya Farmajo iyo Fahad dalkaan waxba uma soo wadaan ee waa inay abuurantaa cudud kale oo seddexaad oo buuxisa booskan bannaan dalkana Badbaadisaa.